2018 fọrọ nke nta na njedebe, nke pụrụ nanị ịpụta na Christmas bụ nso! Ndị mmadụ na-ka na-anaghị ejikere maka ya, mana maka ndị njem, ọ bụ nnukwu oge na-eme atụmatụ a njem. Ọ bụrụ na ị na-achọ nri obodo-eji Christmas na, anyị na-na na nwetara gị kpuchie.
Isiokwu a ga-enye gị a zuru ezu ndepụta nke kacha mma n'obodo na-eji Christmas na. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị ga -agwa gị gbasara ihe niile na -atọ ụtọ ị nwere ike ime ebe ahụ, ma ihe, ga-esi ruo obodo ndị a ụgbọ okporo ígwè.
Ị nwere ike ịga Amsterdam ụgbọ okporo ígwè si fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla Europe. The Central ojii ejikọ Paris, Frankfurt, Brussels, London, Zurich, Berlin, Prague, na ọtụtụ ndị ọzọ. E nwere mgbe e ka ọtụtụ n'ime ha na ọtụtụ ndị ọzọ na obodo na Netherlands. Ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ na ụgbọ oloko Europe ị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ obodo kacha mma iji mee ekeresimesi 1 njem.
Ọzọkwa, ị ga-ahụ pụtara Buda Castle na nzuko omeiwu Building. Ma ihe i nwere ike ime na oyi, e nwere ọtụtụ. Site na-agba ndị streetcars na iji atụrụ na Budapest Park ice rink, enwere ọtụtụ ihe ime ebe a mgbe niile. Ọzọkwa, echefula ileta ahịa ekeresimesi na Vorosmarty Mpaghara na ngosi ekeresimesi na Basilica.
Otu n'ime ihe mere anyị ji họrọ geneva maka obodo kacha mma iji mepee blọgụ ekeresimesi bụ na ndị hụrụ nri n'anya kwesịrị ị rejoiceụrị ọ asụ dị ka obodo mbụ.-Christmas ahịa awade nri si n'ụwa nile. Ihe bụ ihe ọzọ, ị nwere ike ịga na ụlọ ahịa Na-eje ije na ndị Street, na mgbe ahụ gaa na ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama akara. a na-agụnye Obí nke United Nations, St Pierre Cathedral, Water Jet, na ndị ọzọ.